ယူနိက်တက်ရဲ့ LEGENDကြီး စီရော်နယ်ဒိုကို အိုးထရက်ဖို့ဒ်ကို ပြန်လာဖို့ INSTAGRAM မှာ ပုံတင်ပြီး တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်မလေး မာရီယာ – Sport Gaber
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဆိုတဲ့ အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ အသင်းကို အားပေးကျတာ ကမ္ဘာကျော်တွေ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေ အဆိုတော်တွေ အများရှိပါတယ်…
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ တောက်ပြောင်လှပတဲ အနီရောင်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ကျသလို ယူနိက်တက်ရဲ့အောင်မြင်မှုပုံရိပ်တွေကို နှစ်သက်ကျတာမို့ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးမှာ ယူနိက်တက်ဖန်တွေရှိတာပါ…
ယနေ့မှာတော့ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဖန်တွေ အလိုလားအတောင်းတဆုံး အပြောင်းအရွေ့တခုကို မော်ဒယ်မလေး မာရီယာက Instagram မှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်….
မော်ဒယ်မာရီယာက ” မန်ချက်စတာယူနိက်တက်သို့ စီရော်နယ်ဒို ပြန်လာပါက Legend ကစားသမားပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်….တနေ့မှာ ပြန်လာစေချင်ကြောင်းကို သူ့ရဲ့ Instagram မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်…
မာရီယာ ဟာ မန်ချက်စတာယူနိက်တက် အမာခံပရိတ်သတ်တဦးဖြစ်ပြီး မန်ချက်စတာယူနိက်တက် Legend တဦးဖြစ်တဲ့ကန်တိုနာ ကိုလည်း ကြိုက်နှစ်သက်သူတဦးပါတဲ့….
အီတလီ စီးရီးအေ အင်အားကြီးအသင်း ဖြစ်တဲ့ ဂျူဗင်တပ်အသင်းဟာ သူတို့အသင်းရဲ့ ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်သူ ရိုနယ်ဒိုကို ယခုနှစ် နွေရာသီမှာ ရောင်းချသွားတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း အီတလီ အခြေစိုက် သတင်းဌာန အများစုနဲ့ ဥရောပ အခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေက ဖော်ပြသွားကြပါတယ်။
အသက် ၃၅နှစ် အရွယ် ပေါ်တူဂီ လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူး ရိုနယ်ဒိုဟာ ဂျူဗင်တပ်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း ၁နှစ်သာ ကျန်ရှိတော့တဲ့ ကစားသမားတဦး ဖြစ်သလို လက်ရှိ ဂျူဗင်တပ်အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ် အယ်လီဂရီနီဟာ သူ့ရဲ့ အသင်းမှာ ရိုနယ်ဒို ရှိနေတာကို သဘောမကျတာကြောင့် ယခုနှစ် နွေရာသီမှာပဲ ရိုနယ်ဒိုကို ရောင်းထုတ်ဖို့ အသင်းရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ထံ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
တဖက်မှာလည်း ရိုနယ်ဒိုဟာ ဂျူဗင်တပ်အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ ကြားမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ အေးခဲနေသလို ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီ ကုန်ဆုံးချိန်လောက်မှာ သူ့ကို လူသိရှင်ကြား ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ နည်းပြ အယ်လီဂရီနီရဲ့ လက်အောက်မှာ ကစားဖို့ ဆန္ဒမရှိတာကြောင့် ယခုနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ စိုင်းပြင်းနေပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ရိုနယ်ဒိုကို ခေါ်ယူဖို့ အသင်းဟောင်း မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့ ပြင်သစ် အင်အားကြီးအသင်း ဖြစ်တဲ့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းတို့က စိတ်ဝင်စားနေပြီး ရိုနယ်ဒိုကတော့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းထက် အသင်းဟောင်း မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ထံ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ပိုမို စိတ်ဝင်စားနေကာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းထံ ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရဖို့ လစာငွေ လျှော့ယူမှုတွေလည်း ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ ပေါ်တူဂီအခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေက ဖော်ပြသွားပါတယ်။
မာရီယာရဲ့ ဆုတောင်းတွေပြည့်မလား မပြည့်ဖူးလားဆိုတာတော့ လာမယ့် အပြောင်းအရွေ့ Window မှာဘဲစောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လားဗျာ….